21. Atthi Paccaya | Dhamma Training Center
Mar 31 st, 2020
၂၁ – အတ္ထိပစ္စယော Atthi Paccayo (Presence condition) PDF File
၂၁ – အတ္ထိပစ္စယော Atthi Paccayo (Presence condition) PDF File ၂၁ – အတ္ထိပစ္စယော Atthi Paccayo (Presence condition) PDF...
Mar 26 th, 2020
၁ – ကုသလတ္တိက ၇ – ပဥှာဝါရ ၁ – ပစ္စယာနုလောမ ၁ – ၀ိဘင်္ဂ၀ါရ ၂၁ – အတ္ထိပစ္စယော Atthi Paccayo (Presence condition) 21. Atthipaccayo –...
21. Atthipaccayo Pańhāvāro 435. Kusalo dhammo kusalassa dhammassa atthipaccayena paccayo. Kusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa atthipaccayena paccayo. Dve...
၂၁ – အတ္ထိပစ္စယော Atthi Paccayo (Presence condition) (3 of 8)
၂၁-အတ္ထိပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိ zawgyi ၄၃၅။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။ ကုသလော ဧကော ခန္ဓော တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။ တယော ခန္ဓာ ဧကဿ ခန္ဓဿ အတ္ထိပစ္စယေန...
၂၁-အတ္ထိပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိ နှင့် မြန်မာ zawgyi ၄၃၅။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု-၁) ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအား အတ္ထိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ ကုသလော ဧကော...
၂၁-အတ္ထိပစ္စယော zawgyi ဘ၀နှင့်ပဋ္ဌာန်း သင်ခန်းစာ အတ္ထိပစ္စည်းဟူသည် ထင်ရှားရှိပြီး ကျေးဇူးပြုသည့် ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်နည်းဆိုပါက Presence condition အဖြစ် ကျေးဇူးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ အကြောင်းတရားတို့လည်း ထင်ရှားရှိနေပြီး အကျိုးပြုမည့် တရား ကလည်း ထင်ရှားရှိနေသည့်ပစ္စည်းကို အတ္ထိပစ္စည်းဟုခေါ်သည်။ ရှိနေခိုက်တွင် ကျေးဇူးပြုပါက...
၂၁ – အတ္ထိပစ္စယော Atthi Paccayo (Presence condition) (6 of 8)
အတ္ထိပစ္စည်း၏ မျိုးကွဲများ zawgyi အတ္ထိပစ္စည်းသည် “သဟဇာတ၊ ပုရေဇာတ၊ ပစ္ဆာဇာတ၊ အာဟာရ၊ ဣန္ဒြိယ” ဟူသော ပစ္စည်းငါးမျိုးတို့နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိ၏၊ ထို့ကြောင့် အတ္ထိပစ္စည်းသည် ထိုထိုပစ္စည်းငါးမျိုးထဲကပင် ပစ္စုပ္ပန်အနေ ထင်ရှားတင်းလင်း ရှိဆဲ အဖြစ်ဖြင့် ကျေးဇူးပြုသော ပစ္စည်းတရားမျိုးကို စုပေါင်း၍...
၂၁ – အတ္ထိပစ္စယော Atthi Paccayo (Presence condition) (7 of 8)
အတ္ထိပစ္စည်း၏ အပိုင်း ၇-ပိုင်း zawgyi ၁။ စတ္တာရော ခန္ဓာ အရူပိနော အညမညံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (နာမ်ခန္ဓာလေးပါး) ၂။ စတ္တာရော မဟာဘူတာ အညမညံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (မဟာဘုတ် ၄ပါး)...
၂၁ – အတ္ထိပစ္စယော Atthi Paccayo (Presence condition) (8 of 8)
စိတ္တဇရုပ် (၄-စတုတ္တ) “စိတ္တစေတသိကာ ဓမ္မာ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော”။ (စိတ် စေတသိက်) (နာမ်ကရုပ်ကို ကျေးဇူးပြုသည်) စိတ်စေတသိက်တရားတို့က စိတ္တဇရုပ်ကို ထုတ်လုပ်သည်။ ပမာပြရသော် စိတ်ဆိုးပါက စိတ်ရော၊ ရုပ်ပါ ကြမ်းတမ်းလာပါသည်။ စိတ်စေတသိက်တရားတို့ရှိနေသည့်အခိုက်၌ အပြန်အလှန် ကျေးဇူးပြုသောကြောင့်...